China Manufacturer Aluminum Circle For Fry Pans / Circle Aluminum Plate - Zhejiang Shuanglin Jiate Metal Technology Co., Ltd
firaka SETRA Hateviny (MG) Savaivony (MG) Standard
firaka Min.AL Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ca V Ti Other
1. Fihetseham-po: fanondranana fanondranana entana, na araka izay takiana.
2. Fanomezana: amin'ny L / C mijery na TT manohitra ny kopia B / L
3. Fandefasana: 30 ~ 40 andro aorian'ny fandraisana ny vola fandoavam-bola na ny tsy hita maso L / C.
4. Fepetra ara-barotra: FOB any amin'ny seranan-tsambon'i Shina, na seranana CIF entrée.
Nahoana no misafidy isika?
1. Tsara kalitao & vidin'ny vidiny: toy ny mpanamboatra lehibe iray isika dia nahazo vatana mangatsiaka matihanina, mpiasa an-kalamanjana ary fitaovana efa hatry ny ela mba hiantohana ny kalitao ary hampihenana ny fandaniana.
2. Famolavolana ny famokarana: ny atrikasanay dia ahafahana manamboatra milina 1 + 4, milina famokarana milimetatra 4, sy milina famokarana milimetatra 5, ary fitaovana feno mpanjono rehetra. Afaka mamolavola ny ala, ny polisy, ny sarimihetsika, ny fanonganam-pandehanana, ny fihodinan'ny famokarana, ny fametrahana lavaka, ny famokarana endriny, ny fametahana sy ny famokarana ny voninkazo, sns ... araka ny zavatra takian'ny mpanjifa.
4.Our motto: mpanjifa aloha. Raha misy fifandonana dia mizara andraikitra amin'ny mpividy izahay fa mihevitra fa tsy mety ny fahadisoantsika.
Modelnummer: 1000 serize 3000 serize
Fampiharana: famokarana fitaovam-pihinanana, fitaovana, vilany, kitay sy kesika.
Grade: 1000serize 3000serize
Al Content (%):> 95%
Orinasa na tsia: Manimba
anarana: kodiarana aluminium ho an'ny alan-koditra misy ala
Diameter (mm): 20 - 1200mm
ora fanaterana: ao anatin'ny 30 andro aorian'ny fandraisana ny fametrahana
Teny manan-danja: alim-bary ho an'ny alikaola
anarana iray manontolo: mpanamboatra alimina mpanodina alimina ho an'ny poti-tsaka